Rayson any amin'ny faritra indostrialy Rayson, làlana Huasha, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, Sina. Vokatra lehibe HighQuality Latex fitadidiana foam pillow Wholesale-Rayson Spring Mattress Manufacturer
ny heat sink amin'ny vokatra dia natao hamoahana tsara ny hafanana amin'ny hazavana ary avy eo afindrany amin'ny rivotra.
Ny facto Mampanantena izahay fa ny vokatra dia alefa any amin'ny mpanjifa azo antoka sy milamina. Raha manana fanontaniana ianao na te hahafantatra bebe kokoa momba ny, dia antsoy izahay mivantana. Ankoatr'izay, ny fandefasana anay dia ara-potoana ary afaka mamaly ny filan'ny mpanjifa tsirairay. Hatreto, Rayson dia nandany ny fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena. Ny vokatra rehetra ao anatin'izany ny vokatra vaovao dia omena endrika vaovao, kalitao azo antoka ary vidiny mifaninana.
Inona avy ireo fomba fandoavam-bola ekenao? LC amin'ny fahitana / amin'ny TT, 30% Deposi ary fifandanjana 70% dia mifanohitra amin'ny kopian'ny antontan-taratasy fandefasana witinin 7 andro fiasana. Azonao atao ve ny manampy ahy hanao ny volavolainay manokana na hampiasa ny sary famantarana amin'ny vokatra? Azonay atao ny manao ilay kidoro arakaraka ny volavolanao na manome serivisy OEM mila anao fotsiny hanome ny sangan'asan'ny vokatrao na sary famantarana. Ahoana ny famongorana kidoro? 1. Apetaho amin'ny baoritra eo amin'ny efitranonao ny baoritra, esory tsara ny kidoro ary apetraho eo am-pandrianao. 2. Sasao tsara amin'ny kitapo ny kitapo ivelany mba hahazoana antoka fa tsy hokapainao ny plastika ratsy ao anatiny na ny kidoro, aza mitory antsy. 3. Esory eo ambony fandrianao ilay kidoro nasiana tombo-kase 4. Sasao tsara ny kitapo plastika miaraka amin'ny famantaranandro rehefa manomboka decompress ny kidoro, esory ny kitapo plastika. 5.Avelao 24 ora hivelatra tanteraka ny kidoranao vaovao.